Kedu nri ndị kachasị mma iji lụso ọrịa cancer akpa ume ọgụ? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Nri na-egbochi kansa cancer - otu esi emeso
Kedu nri ndị kachasị mma iji lụso ọrịa cancer akpa ume ọgụ?
Nri anụ ahụ dị ka ọkụkọ, azụ, ma ọ bụ tolotolo.
Ngwa abụba ndị dị ala dị ka mmiri ara ehi, yogọt, na chiiz ma ọ bụ mmiri ara ehi edochi.
Mkpụrụ na nkpuru aki.
Ọgwụ mgbochi ọrịa nyere m olileanya. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ nwere ike inyere aka. Ndị ọrịa ndị ọzọ abịarutela m n'ike mmụọ nsọ, nke a bụ olileanya m ịhapụ ahụmahụ m nyere onye na-esote aka.
Aha m bụ K.C. Dil - M bi na Conroe, Texas.
Abụ m nwunye, nne na onye ọrụ mkpuchi. Adị m afọ iri anọ ma nwee ihu ọzịza nke mere na agara m na ụlọ mberede wee chọpụta na m nwere ọrịa cancer nke Stage IIIA ma nwee ụdị ndụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Mụ na di m na-arụ ọrụ oge niile, mana na nke ahụ, nne m gbalịsiri ike na ọrịa kansa nke Stage IV, nke bụ otu ụdị na obere ụgwọ a chọpụtara m, ihe kachasị ike m ga-eme, ịpụ nke ulo ogwu, na ulo m Ikupu mama m gwa ya na m nwere otu ihe.
My prognosis bụ nnọọ olileanya ọjọọ. Ọ bụ nnukwu akpụ. Ọgwụ m bụ nanị ọgwụgwọ ọgwụ na radieshon ruo izu 15 nke ọgwụgwọ.
Ekwuru m, 'nke ahụ zuru.' Anyị kwesịrị ịchọta nhọrọ ọzọ n'ihi na ọ gburu m n'ụzọ nkịtị. Mgbe m hụrụ Dọkịta Zhang, mgbe kemoterapi na radieshon gasịrị, otu lymph nọ n'okpuru aka ekpe m agafeela wee bulie ya n'ọkwa nke anọ.
Enweghị m ụzọ isi rụọ ọrụ n'ihi ezinụlọ m - N'oge a, anyị nwere data na-agba ume na immunotherapy nke mere na nke a bụ nhọrọ mbụ m nyere ya. Nke bu eziokwu bu na achoputara ya na oria cancer nke anakpo IV ma na omenala dika ihe anaghi agwọ. Mgbe ọ gwara m na m kwesịrị ọgwụgwọ na immunotherapy.
Abatara m ụlọ ozugbo wee hụ ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ gbasara ọrịa dịka nke m. Ejila nivolumab mesoo gị na ule ahụike. Echere m na ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ maka ya ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka m.
Emebere Nivolumab na mbido, mana ọ bụghị maka ụdị kansa gị, mgbe ahụ anyị tinyere akwụkwọ maka iji ọmịiko. Fọdụ ọgwụ malitere usoro a iji nyere ndị ọrịa aka na anyị nwere ihe akaebe doro anya na ha ga-erite uru na ọgwụgwọ a ruo izu. Mgbe emechara ọgwụgwọ mbụ m, enwetara m ụdị ahụ mgbaàmà dị nro mana m gara mgbatị ahụ n’echi ya ọgwụgwọ mbụ m nwere agba na anụ ahụ m ọzọ.
Ntutu isi m buru ibu. Nke a nyere m ike karị na mgbe nyocha mbụ enwere obere ntụpọ ole na ole, mana mgbe ọgwụgwọ 16 enweghị akara nke ọrịa. Anyị nọ na mgbaghara.
Nke a mere ka onye ọ bụla nọ n’ime ụlọ ahụ bee akwa, gụnyere Dọkịta Zhang, ndị ọrịa gị, ịmara? Obi dị m ezigbo ụtọ na ha. Nwa gị nwanyị nke okenye na-aga ụlọ akwụkwọ mahadum wee laghachi n'ọrụ afọ a. Kpọ mgbịrịgba ahụ pụtara na njedebe nke ọgwụgwọ gị.
Nye m, ọ bụ ụzọ na-eduga na ndụ ọhụrụ. Anọ m n'ụzọ mgbake. Agwọọla m.
Enweghị m ihe ịrịba ama nke ọrịa maka ọnwa 25 ma enwetabeghị ọgwụgwọ ọ bụla n'ime afọ 19. Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Cancer na-achọ ka immunotherapy bụrụ ụkpụrụ ọgwụgwọ maka nyocha, enwere m nnọọ ekele.
Kedu mkpụrụ osisi dị mma maka kansa cancer?
Dị ka ndị ọzọmkpụrụ osisi, ube nwere ike ịnwe ikekansa- ọgụ ọgụ. N'ezie, nnyocha e mere n'ihe karịrị mmadụ 478,000 gosiri na ị intakeụ apụl na ube dị elu metụtara ihe ize ndụ dị ala nke ịzụlitekansa ume(47).Ọgọst 28 2019
Olee otu esi egbochi oria akpa ume?
Ihe kachasị mkpa ịnwere ikemeegbochie kansa umeagaghị amalite ị smokingụ sịga, ma ọ bụ ịkwụsị ị ifụ sịga. Zere ịhandụ sịga sịga. A na-akpọ anwụrụ ọkụ nke ndị ọzọ, sịga, ma ọ bụ ọkpọkọ anwụrụ ọkụ ndị ọzọ. Mee ka ụlọ na ụgbọ ala gị ghara ị smokeụ anwụrụ ọkụ.
Ya mere, olee ihe ngosi ochie? Yabụ ọ bụrụ na ị nwere onye nwere ọrịa cancer akpa ume na ebe etiti ma ọ bụ n'otu n'ime ngwụcha nnukwu bronchi aha ahụ nwere ike ịda ụkwara ma ọ bụrụ na etuto ndị a abanye na bronchus ha nwere ike ịgba ọbara ntakịrị na bronchus ma mee ha OPS Mgbe ụfọdụ Otú ọ dị, hemoptysis a na-egbu egbu dị ka etuto ahụ na-abanye n'ime akwara ọbara nke na-agba ọbara ngwa ngwa nke na onye ọrịa ahụ nwụrụ na hemoptysis buru ibu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere oke nke dị na mpụta nke ngụgụ na-adịghị nso isi bronchus, ọ nwere ike ịnọgide na-abụ ezigbo usoro maka ogologo oge ma a na-ejikarị x-ray achọpụta etuto ndị a karịa igosipụta mgbaàmà. Ihe ngosi ọzọ maka akpụ na-eme na bronchus bụ na ọ nwere ike igbochi bronchus ahụ ma mee ka ihe a na-akpọ lobe daa, nke nwere ike ịbụ akụkụ ala aka nri, dị ka e gosiri na foto a, ọ nwere ike ịbụ oke aka nri nke elu, nwere ike ịbụ Lung niile ma ọ bụ onye ọrịa a nwere ike ịnwe maka ọdịda X-ray nke ume na nsogbu iku ume E nwere ntụgharị oge karịa izu ole na ole ma ọ bụrụ na ngụgụ akabeghị kpamkpam, mana bronchus emechibidoro ma onye ọrịa ahụ nwere ike ịta ụfụ. n'oge nyocha nke mpaghara ahụ nwere nke ahụ bụ iku ume na-ekpo ọkụ, ọ nwere ihe edeturu nke dị iche na ahịhịa ị nwetara na ụkwara ume ọkụ, nke ahụ bụ polyphonic nwere ọtụtụ ụda na ihe kpatara na ọ bụ iku ume monophonic bụ na ọ dị naanị otu ebe mgbochi, ya mere naanị otu ihe edeturu nke na-ekpebi eruba pụtara na mpaghara a na n'ezie akụkụ Ọdịdị nke isi ikuku na-eme ka ahụ nwee ike ikpochapụ ikuku a na ngụgụ distal site na ọrịa ma ọ bụ nje bacteria na-abanye na rea nwayọ nwayọ, yabụ ndị na-arịa oyi baa nwere ike iwe.
Ya mere, na onye na-ese anwụrụ na oyi baa, anyị ga-amararịrị na nke a nwere ike ịbụ ihe na-egosi mgbochi mgbochi etiti site na ụbụrụ a na-amaghị ama, dịka m kwurula otu ihe dị mkpa nke mgbaàmà iji gosipụta maka ndị ọrịa nwere ọrịa cancer akpa ume, usoro mgbaàmà usoro, ọnwụ ọnwụ. , enweghị agụụ n'ozuzu Malaise na ike ọgwụgwụ na mgbe ị nwere mgbaàmà ndị a ịkwesịrị ịtụle ọrịa kansa dị ka nchoputa enwere ike na onye ọrịa n'onwe ya nwere ike ile anya na-enweghị isi n'ihi oke nhụjuanya ọ hụrụ ọkachasị na ọtụtụ ndị ọrịa carcinoma cell squamous ka ha wee mee ndị a kwere omume n'ihu na-eto eto ikekwe atọ ga-ekwe omume ihe atụ nke a na-akọwa nke a bụ onye ọrịa na-ụkwara n'ihi na ha ụkwara na ọbara n'ihi na onye mere a bronchoscopy na mgbe ha na-ele anya ala a bronchoscopy ihe ha nwere ike ịhụ bụ akpụ gburugburu elu lob bronchus na obi x-ray bl ocked, na-egosi ọdịda nke akuku a dị elu nke mere na ọ bụ isi etiti na-akpata ọdịda akụkụ nke ngụgụ na hemoptysis. Onye ọrịa a na - esote nwere ihe mgbu aka yana ihe mere o ji enwe ihe mgbu bụ na ọ nwere akpụ akpụ nke na - abanye na brachia plexus ial plexus nke a na - akpọ akpụ Pancoast, yabụ na ọ bụ ụzọ dị iche iche dị iche, ọ bụ ezie na ọ ka bụ ụkwara mgbago elu nri na nke ato a bu ihe ozo bu Ruffalo ozo na aka nri ya na nke a bu oria a na-achoghi aka ya ime ka ihe mgbaàmà di na ebe a ma ewere ya na x-ray emere maka ihe ndi ozo ma nke a bu ihe di oke ngosipụta zuru oke maka ọrịa cancer akpa ume, nke bụ ihe anasymptomatic na-adịghị mma akọwapụtara na X-ray. e mere maka ihe ndị ọzọ
Apụl na-egbochi ọrịa cancer akpa ume?
Ọ dịkarịa ala otu meta-analysis - ọmụmụ nke na-ele nza nke nchọpụta gara aga na isiokwu - njikọapụlna mbelata ihe ize ndụ makakansa. Njikọ ahụ yiri ka ọ dị ikekansa ume. Maapụlnwekwara ike inye aka kpuchido megide: arakansa.Ọnwa Ise 25, 2020
Gịnị tii dị mma maka ọrịa cancer akpa ume?
Ndabere: Greentiibụ ihe ọ widelyụ widelyụ a na-ejikarịkansa umendị ọrịa na ọha na eze maka ihe ekwuru na ọ na-egbochi ndị ọrịa.
Kedu nri ndị dị mma maka akpa ume?
Kọfị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, azụ mara abụba, ose, tomato, mmanụ oliv, oyster, blueberries, na ugu bụcha ihe atụ ụfọdụ.nrina nnipa mpempem pii a wohuu amane saa noakpa umeọrụ.24.06.2020
Kedu nri ndị na - enyere aka idozi ngụgụ?
Ha gụnyere osikapa na-acha aja aja, achịcha ọka wit dum, pasta nke ọka wit, ọka osa, quinoa, na ọka bali. Ọbụghị naanị ọka niilenrinnukwu eriri, nke nwere àgwà antioxidant na mgbochi mkpali, mana ha jupụtara na vitamin E, selenium, na acids bara uru dị mkpa, nke dị mmaakpa umeahụike.Ọgọst 13 2020
mmiri àmà bike ogologo ọkpa
Apple ọ dị mma maka ngụgụ?
Apụl. Nnyocha egosiwo na iri nri mgbe niileapụlnwere ike inye aka kwaliteakpa umeọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọmụmụ ihe na-egosi nke ahụapụloriri na-ejikọta ya na iji nwayọ nwayọ naakpa umearụ ọrụ na ndị na-ese anwụrụ ọkụ.June 24. 2020bọchị 2020
Apụl ha na-ehicha akpa ume gị?
.B.ọmụmụ site naiheSlọ akwụkwọ Ahụike Ọha nke Johns Hopkins Bloomberg hụrụiheeke adaba naakpa umerụọ ọrụkaOge 10 dị nwayọ n'etiti ndị na-ese anwụrụ ọkụkanri dị elu na tomato na mkpụrụ osisi, karịsịaapụl, na-atụ aro ụfọdụ ihe ndị dị na nri ndị a nwere ike inye aka weghachiakpa umemmebi nke ị smokingụ sịga na-eme.Mkpebi 21 2017
Kedu ihe ọ juiceụ juiceụ dị mma maka ọrịa cancer akpa ume?
PọmigranetIhe ọ Juụ JuụNwere ike inyere ọgụỌrịa Cancer.Eprel 28 2007
Kedu nri ndị nwere ike inye aka gbochie mgbasa nke ọrịa kansa akpa ume?
Jinja. Jinja nwere 6-shogaol nke nwere ike inye aka gbochie mmepe nke ọrịa kansa akpa ume, mana site na omume ya n'okporo ụzọ ndị na-enyere aka ịbawanye kansa, nwere ike belata ihe ize ndụ nke metastases site na ọrịa kansa adịlarị. E gosipụtara uru nke ginger na ịgwọ mkpụrụ ndụ kansa kansa na ụlọ nyocha,
Kedu nri ị nwere ike iri iji belata ihe egwu nke kansa?
O nweghi otu nri ga - echebe gị pụọ na kansa n’onwe ya. Mana nyocha gosiri na nri jupụtara n'ọtụtụ akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, ọka niile, agwa na nri osisi ndị ọzọ na-enyere aka belata obere ihe egwu maka ọtụtụ ọrịa kansa. Na nyocha ụlọ nyocha, ọtụtụ mineral, vitamin na phytochemicals na-egosi nsonaazụ ọrịa kansa.
Kedu ka esi belata ihe ize ndụ nke ọrịa cancer akpa ume?
Mbelata ihe ize ndụ nke ọrịa cancer akpa ume. 1 Zere ị smokingụ sịga. 2 Na-ebu ibu kwesịrị ekwesị. 3 Kwụsị ị consumptionụ mmanya na-aba n'anya. Rie anụ na-acha ọbara ọbara nke anaghị arụ ọrụ nke ọma (Ọ bụrụ na ị rie anụ uhie, rapara na ahịhịa na ahịhịa). 5 Soro nri dị na Mediterenian ma ọ bụ ihe ọkụkụ. 6 Iri ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ndị toro eto.